ယနေ့ မြို့ ကြီးများ၌ ခေတ်စားနေသော တို့ဆေး ရှူဆေးကို အဘယ်ကြောင့် သံပရာသီးက ကာကွယ်နိုင်တာလဲ •
01/12/2019 Yan Naing ဗဟုသုတ 0
သံပရာသီးကို မူလက တန်ပြန်သီးဟု ခေါ်ကြသည် ဟု သိရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စုန်း မှင် ကဝေ အမှောင့်ပရောဂ တို့ အောက်လမ်းဖြင့် တိုက်ခိုက်လာလျှင် သံပရာသီးကို ခေါင်းအုံးအောက်ထဲ ထည့်အိပ်ပါက အလို အလျောက် တန်ပြန် စေနိူင်ပါသတဲ့… ။
ထိုသို့ အစွမ်းထက်၏ … ထို့ အပြင် အိပ်မွေ့ ချ ၍ ပစ္စည်းများယူ မရနိူင်အောင် ပျက်ပြယ်နိူင်စွမ်းရှိ၏။ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ပြောရလျှင် ငွေတိုးချေးစားသော သူငယ်ချင်းသည် လာဆပ်သော ငွေများ ကိုညနေဘက်က ရေတွက်နေခဲ့ သည်။ သူခိုးသည် မြင်သွား၏ ။
ညဘက်ရောက်သောအခါ တစ်အိမ်သားလုံးကို အိပ်မွေ့ ချ ပြီ။ ကံကောင်းသည်က သူငယ်ချင်းသည် ဟိုးညဘက်က မူး၍ရှူ ထားသော သံပရာသီး လေးက အိပ်ယာထဲတွင် ရှိနေသေးသည်။အသီးက ဝါ၍ ညို ပြီး လိမ်ခြောက်တော့မည် ။ သို့ သော်အစွမ်းပြ၏။
အိပ်မပျော်ဖြစ်၍ ဖုန်းကို ဖွင့်လိုက်သဖြင့်မီးလင်းသွားသည်။ သူခိုးက လန့် ၍ တံခါးကို တိုက်မိပြီး ထွက်ပြေးသွားသည်။ ဒုန်းကနဲ အသံကြား၍ တအိမ်သားလုံး နိူးလာပြီ…။ အိပ်မွေ့ ချသူသည်မစင်များ ထွက်ကျ ပြီး ကိုယ့်မစင်ကို ပြန်၍နင်းသွားလေသည်။ အစီအစဉ် မအောင်မြင်လျှင်ထိုကဲ့ သို့ လုပ်တတ်သည်ဟု ကြားဖူးပါသည်။
အိပ်မွေ့ ချ ၍ပစ္စည်းများခိုးယူခံရလျှင် အဆ်ိုပါအိမ်၌ သူခိုးသည်မစင်များ တန်းစီ၍ ပါခဲ့ သည်။ အဘယ်ကြောင့်ပါလိမ့်နော်!
ယခု ခေတ်စားနေသော တို့ ဆေး ရှူ ဆေး အချွန်ထဲ ထည့်၍ လူအသားထဲ မသိမသာ ထိုးခြင်း တို့နာမည်ကြီးနေပြီ ။ ကလေးတွေ ပျောက် လူငယ်တွေပျောက် လူကြီးတွေဆီက ပစ္စည်းတွေ ချွတ်ယူ တာတို့ဖြစ်ပျက်နေသည်မှာ အံ့သြဖို့ ပင်ကောင်းလှသည်။
ဤသို့ လူက်ို မူးမောထုံထိုင်း အသိညဏ်မဲ့ သွားစေသော တို့ ဆေးများကို သံပရာသီးလေး တစ်လုံးဖြင့်ကာကွယ်ပေးနိူင်သည်။ အိမ်ကမထွက်ခင် သံပရာသီးကို ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ အမြဲဆောင်ထားပါ … ။
YBS အစရှိသော ကားများမစီးခင် လက်သည်းဖြင့် သံပရာသီးကိုဆိတ်၍ ရှူ သွားပါ။ မည်သည့် တို့ ဆေး ရှူ ဆေး မှ မတိုးတော့ပါ ။အလို အလျှောက်အန္တာရာယ် ကင်းပါလိမ့် မည် … ။
သင်တို့ သွားလာနေသော ပတ်ဝန်းကျင်တချိူ့ မှ လူများသည် သံပရာသီးကို လက်ထဲ ကိုင်၍ ရှူ သွားနေကြသည်ကို တွေ့ ရပါလိမ့်မည်။ မိမိကိုယ်ကို မိမိသာလျှင် အသိ သတိ ဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဖြင့်အန္တာရာယ် မှ လွတ်မြောက်နိူင်သည် … ။
ထို အပြင် ဖင်ကို နောက်မှ တမင်တကာ အချွန်ဖြင့် လိုက်ထိုးနေတတ်သော လူယုတ်မာတစ်ချိူ့ ရှိကြသေး၏ ။မကြောက်ပါနဲ့သောက်ခွက်ကို လက်ပြန်သတ် ထည့်လိုက်ပါ ။အားတော့ပါ ပါစေ! သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ ကောင်းသောသူ များ ဝိုင်း၍ ကူညီပါလိမ့်မည် … ။
နောက်ဆုံးတချက်က သွေးတိုးနှလုံးရောဂါသမားများသည် အချိန်မရွေး ရောဂါ ထဖောက်တတ်၏။ သွေးချက်ခြင်းတိုးခြင်း ရင်ဘတ်အောင့်၍ အမောဆို့ အသက်ရှူ ကြပ်လာပါက ချက်ချင်းသံပရာသီးကို လေးစိတ်စိတ်၍ ငုံလိုက်ပါ။ လမ်းသွားနေရင်း ဖြစ်ပါက ဒီအတိုင်း ကိုက်စားလိုက်ပါ။ချက်ခြင်းပျောက်ပါသည် … ။ (လက်တွေ့ )
ဤသည်ကား မှော်အစွမ်းများ ပြည့်နှက်နေသည့်သံပရာသီးပေတည်း အပြင်ထွက်လျှင် သံပရာသီးဆောင်သွားကြပါရန် တိုက်တွန်းပါသည် … ။
တို့ ဆေး ရှူ ဆေး ကြောက်စရာမလိုတော့ပါ … ။
ယနမွေို့ကွီးမြား၌ ခတျေစားနသေော တို့ဆေး ရှူဆေးကို အဘယျကွောငျ့ သံပရာသီးက ကာကှယျနိုငျတာလဲ
သံပရာသီးကို မူလက တနျပွနျသီးဟု ချေါကွသညျ ဟု သိရပါသညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော စုနျး မှငျ ကဝေ အမှောငျ့ပရောဂ တို့အောကျလမျးဖွငျ့ တိုကျခိုကျလာလြှငျ သံပရာသီးကို ခေါငျးအုံးအောကျထဲ ထညျ့အိပျပါက အလို အလြောကျ တနျပွနျ စနေိူငျပါသတဲ့ … ။
ထိုသို့အစှမျးထကျ၏ … ထို့အပွငျ အိပျမှခြေ့ ၍ ပစ်စညျးမြားယူ မရနိူငျအောငျ ပကျြပွယျနိူငျစှမျးရှိ၏။ အဖွဈအပကျြတဈခု ပွောရလြှငျ ငှတေိုးခြေးစားသော သူငယျခငျြးသညျ လာဆပျသော ငှမြေား ကိုညနဘေကျက ရတှေကျနခေဲ့သညျ။ သူခိုးသညျ မွငျသှား၏ ။
ညဘကျရောကျသောအခါ တဈအိမျသားလုံးကို အိပျမှခြေ့ ပွီ။ ကံကောငျးသညျက သူငယျခငျြးသညျ ဟိုးညဘကျက မူး၍ရှူ ထားသော သံပရာသီး လေးက အိပျယာထဲတှငျ ရှိနသေေးသညျ။အသီးက ဝါ၍ ညို ပွီး လိမျခွောကျတော့မညျ ။ သို့သျောအစှမျးပွ၏။
အိပျမပြျောဖွဈ၍ ဖုနျးကို ဖှငျ့လိုကျသဖွငျ့မီးလငျးသှားသညျ။ သူခိုးက လနျ့၍ တံခါးကို တိုကျမိပွီး ထှကျပွေးသှားသညျ။ ဒုနျးကနဲ အသံကွား၍ တအိမျသားလုံး နိူးလာပွီ…။ အိပျမှခေ့သြူသညျမစငျမြား ထှကျကြ ပွီး ကိုယျ့မစငျကို ပွနျ၍နငျးသှားလသေညျ။ အစီအစဉျ မအောငျမွငျလြှငျထိုကဲ့သို့လုပျတတျသညျဟု ကွားဖူးပါသညျ။
အိပျမှခြေ့ ၍ပစ်စညျးမြားခိုးယူခံရလြှငျ အဆိုပါအိမျ၌ သူခိုးသညျမစငျမြား တနျးစီ၍ ပါခဲ့သညျ။ အဘယျကွောငျ့ပါလိမျ့နျော!
ယခု ခတျေစားနသေော တို့ဆေး ရှူ ဆေး အခြှနျထဲ ထညျ့၍ လူအသားထဲ မသိမသာ ထိုးခွငျး တို့ နာမညျကွီးနပွေီ ။ ကလေးတှေ ပြောကျ လူငယျတှပြေောကျ လူကွီးတှဆေီက ပစ်စညျးတှေ ခြှတျယူ တာတို့ ဖွဈပကျြနသေညျမှာ အံ့သွဖို့ပငျကောငျးလှသညျ။
ဤသို့လူကို မူးမောထုံထိုငျး အသိညဏျမဲ့သှားစသေော တို့ဆေးမြားကို သံပရာသီးလေး တဈလုံးဖွငျ့ကာကှယျပေးနိူငျသညျ။ အိမျကမထှကျခငျ သံပရာသီးကို ပိုကျဆံအိတျထဲ အမွဲဆောငျထားပါ … ။
YBS အစရှိသော ကားမြားမစီးခငျ လကျသညျးဖွငျ့ သံပရာသီးကိုဆိတျ၍ ရှူ သှားပါ။ မညျသညျ့တို့ဆေး ရှူ ဆေး မှ မတိုးတော့ပါ ။အလို အလြှောကျအန်တာရာယျ ကငျးပါလိမျ့မညျ … ။
သငျတို့သှားလာနသေော ပတျဝနျးကငျြတခြိူ့မှ လူမြားသညျ သံပရာသီးကို လကျထဲ ကိုငျ၍ ရှူ သှားနကွေသညျကို တှရေ့ပါလိမျ့မညျ။ မိမိကိုယျကို မိမိသာလြှငျ အသိ သတိ ဖွငျ့ ကွိုတငျကာကှယျခွငျးဖွငျ့အန်တာရာယျ မှ လှတျမွောကျနိူငျသညျ … ။
ထို အပွငျ ဖငျကို နောကျမှ တမငျတကာ အခြှနျဖွငျ့ လိုကျထိုးနတေတျသော လူယုတျမာတဈခြိူ့ရှိကွသေး၏ ။မကွောကျပါနဲ့ သောကျခှကျကို လကျပွနျသတျ ထညျ့လိုကျပါ ။အားတော့ပါ ပါစေ! သငျ့ပတျဝနျးကငျြမှ ကောငျးသောသူ မြား ဝိုငျး၍ ကူညီပါလိမျ့မညျ … ။
နောကျဆုံးတခကျြက သှေးတိုးနှလုံးရောဂါသမားမြားသညျ အခြိနျမရှေး ရောဂါ ထဖောကျတတျ၏။ သှေးခကျြခွငျးတိုးခွငျး ရငျဘတျအောငျ့၍ အမောဆို့အသကျရှူ ကွပျလာပါက ခကျြခငျြးသံပရာသီးကို လေးစိတျစိတျ၍ ငုံလိုကျပါ။ လမျးသှားနရေငျး ဖွဈပါက ဒီအတိုငျး ကိုကျစားလိုကျပါ။ခကျြခွငျးပြောကျပါသညျ … ။ (လကျတှေ့)
ဤသညျကား မှျောအစှမျးမြား ပွညျ့နှကျနသေညျ့သံပရာသီးပတေညျး အပွငျထှကျလြှငျ သံပရာသီးဆောငျသှားကွပါရနျ တိုကျတှနျးပါသညျ … ။
တို့ဆေး ရှူ ဆေး ကွောကျစရာမလိုတော့ပါ … ။
This Year : 89991
Total Hits : 1247601